Teknolojia - Filter Tech
R&D mifantoka amin'ny tsena
Ataonay laharam-pahamehana ny filàna sy ny filan'ny tsena hamorona vokatra mifanaraka amin'ny fangatahanao. Manatsara hatrany ny portfolio-ny vokatra izahay ary koa ny firafitry ny vokatra miaraka amin'ny teknolojia vaovao hanomezana vahaolana samihafa sy hanafohezana ny tsingerin'ny fampandrosoana ny vokatra. Ny valiny haingana amin'ny tsena sy ny vahaolantsika manokana dia manampy antsika hanana fifaninanana bebe kokoa eo amin'ny tsena.
Fampandrosoana tarihan'ny teknolojia
Patanty ho an'ny famoronana
Patanty ho an'ny maodely azo ampiasaina
Patanty ho an'ny endrika ivelany
Teknolojia sivana mitambatra vita patanty
Ny tena mahatonga ny traikefan'ny mpampiasa dia lasa lavitra lavitra noho ny manome anao izay angatahinao. Izahay dia mikendry ny hanomezana anao traikefa bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanampiana ara-teknika anao amin'ny olana tsy hita maso isan'andro. Rehefa mifantoka hatrany amin'ny fikarohana sy ny fampiharana ny haitao mandroso amin'ny filtration amin'ny rano izahay dia nahazo fahombiazana lehibe teo amin'ny fiarovana ny vokatra, ny traikefan'ny mpampiasa ary ny sanda ara-tontolo iainana.
Teknolojia fijanonan'ny rano mivaingana mivaingana
Izahay dia nahazo alalana patanty ho an'ny haitao toy ny tabilaon-drano tafiditra, fiarovana ny rano, fiarovana ny tsy fahampian'ny rano, fanoloana sivana tsy misy olana, fifehezana manan-tsaina, famoahana VC, fitsitsiana angovo, sns. Miaraka amin'ny fanohananay matanjaka ara-teknika, manolotra tombony bebe kokoa amin'ny orinasa izahay satria hisongadina ny vokatrao sy ny marika ary hanao tsara eo amin'ny tsenan'ny fifaninanana tena mifaninana.
Mba hifanarahana amin'ny fiovan'ny teknolojia dia nametraka fiaraha-miasa lalina amin'ireo oniversite malaza isan-karazany za-draharaha amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny haino aman-jery sivana isika. Amin'ny alàlan'ny fizarana teknolojia dia manatsara ny fahafaha-manaontsika izahay izay manampy anay hanana fahafaha-manao bebe kokoa ary hanome lanja marika ho anao. Androany ny Filter Tech dia nanjary orinasa Teknolojia avo lenta eken'ny firenena.
Ekipa R&D efa vonona tsara
Manana ekipa R&D efa vonona tsara izahay izay misy injeniera mihoatra ny 120. Izy ireo dia manome anao vahaolana amin'ny filtration rano amin'ny fomba fijery matihanina.
Ny zavatra ilainao sy ny tadiavinao no loha laharana. Manao fikarohana ara-barotra tsy tapaka izahay ary mampiasa sehatra R&D vokatra hamoronana paikady vokatra mifanaraka amin'izany. Izahay dia manome anao vokatra manokana momba ny fanadiovana rano amin'ny trano manontolo sy vahaolana hatramin'ny fidirana ka hatramin'ny fampiasana.
Eo am-pikatsahana ny hatsarana sy ny fahafinaretana amin'ny vokatra misy hevitra manentana ny saina, dia manome anao ny volavolan'ny vokatra amin'ny alàlan'ny hevitra noforoninay sy ny fahaizan'ny famolavolana miavaka izahay, manampy anao hisambotra ny fironana amin'ny tsena ary hivarotra tsara kokoa.
Mba hamadihana ilay hevitra mampientam-po ho lasa vokatra azo tratrarina, amin'ny alàlan'ny famaritana tanteraka ny famaritana ny vokatra, dia manao famolavolana sy fivoarana mirindra izahay mba hahazoana antoka fa novolavolaina amin'ny vidiny ambany ny vokatra, amin'ny fotoana fohy kokoa, nefa manana kalitao avo kokoa.
© Copyright - 2010-2021: Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap
Rafitra Osmosis Reverse tsara indrindra, Paompy Rafitra fanivanana rano, Mpanadio rano amin'ny trano iray manontolo, Fanadiovan-drano ho an'ny rano mafy, Sarina cartridges, Fanoloana sivana amin'ny cartridge amin'ny rano,